I-Mt Ida (eco) Indlu yamaplanga - I-Airbnb
I-Mt Ida (eco) Indlu yamaplanga
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCally
Indlu yamaplanga entle nebangel 'umdla yesibini. Ngaphandle kwegridi, ngoko awuzukushiya ungcoliseko lwe-carbon, kodwa ngokucofa izinto zobunewunewu. Uza kuba noxolo nokuzola xa ubuka ifama yasekuhlaleni kunye neMt Ida. Indlu yamaplanga yeyakho yonke ukuze uphole
Indlu yamaplanga yenziwa ngazo zonke izinto ezinokuphinda zisetyenziswe - eyakhiwe ngesitayile. Iphumile kwi-intanethi (ngoko awuzukushiya ungcoliseko lwe-carbon) kunye nokupheka ngegesi kunye namanzi ashushu kunye nombane we-solar/webhetri wokukhanyisa, umculo njl njl. Umlilo wamaplanga weentsuku zasebusika
Singaphantsi kweekhilomitha eziyi-10 ukusuka kwiindawo zewayini ezingaphezu kwe-15 kunye neminyango yegumbi, zonke zibonisa iwayini yasekuhlaleni yeHeathcote. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-5 ukusuka edolophini kunye nekofu, iivenkile zokutyela njl njl. Ngaphantsi kweekhilomitha eziyi-1 ukusuka kummandla ophakamileyo wasemntla kodwa ukwifama yokwenene yaseOstreliya. Sisekude ngeekhilomitha eziyi-2 ukusuka kumzila wololiwe waseKeefe kwaye sinokubonelela ngeebhayisekile
Umbuki zindwendwe ngu- Cally
Siza kuzama ukudibana nawe xa ufika size sikunike naluphi na uncedo oludingayo, kungenjalo uza kuzenzela ngokwakho